ज्वरो : कोरोना नै हो र ? – korea pati
May 20, 2020 Korea patiLeaveaComment on ज्वरो : कोरोना नै हो र ?
अहिले कसैलाई अचानक ज्वरो आउनसाथ आशंका पैदा हुन्छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण पो भयो कि ? उमेरले ६० वर्षभन्दा माथिका, गर्भवती वा दीर्घरोगीहरु पनि यस्ता सामान्य लक्षण देखापर्न साथ आत्तिने गर्छन् ।विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जारी तथ्यांक अनुसार उच्च ज्वरो, थकान, निरन्तर खोकी, श्वारप्रश्वासमा समस्या आदि कोरोना भाइरसको प्रारम्भिक लक्षण हुन् ।
यद्यपि यसको लक्षणमा अहिलेसम्म एकरुपता देखिएको छैन ।कतिपयलाई लक्षण नै देखा नपरी कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । जबकी कतिपयमा हु–बहु लक्षण मिलेर पनि उनीहरुमा कोरोना संक्रमण भएको देखिदैन ।त्यसो त भूगोल र व्यक्ति अनुसार समेत कोरोनाको लक्षणमा एकरुपता छैन ।
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुमा गरिएको अध्ययनबाट सामान्यत निम्न लक्षणहरु देखिए ।
कोरोनाबाट संक्रमित धेरैजसोलाई उच्च ज्वरो देखिएको थियो ।
अधिकांश कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई खोकी लागेको थियो । निरन्तर खोकी पनि कोरोनाको साझा लक्षण पाइयो ।
कतिपयमा कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि थकान अनुभव भएको पाइयो । सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी थकाई लाग्नु पनि यसको लक्षण हो भनेर पुष्टि भयो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि अधिकांशलाई सास फेर्न गाह्रो भएको पाइयो । सुरुमा खोकी लाग्ने, घाटी खसखसाउने, टाउको दुख्ने लक्षण देखिए ।
यी सबै किसिमका लक्षणसँगै ज्वरो भने साझा लक्षणको रुपमा देखियो । त्यसैले पनि अहिले ज्वरो आउनसाथ धेरैले चिन्ता गर्छन् । जबकी ज्वरो भनेको सामान्य अवस्थामा पनि आउँछ । तर, सामान्य ज्वरो र कोरोना भाइरसको कारण हुने ज्वरोलाई कसरी पहिचान गर्ने त ?
सामान्य शरीरको तापक्रम ९७ डिग्री फरेनहाइटदेखि ९९ डिग्री फरेनहाइटसम्म हुन्छ । हाम्रो शरीरको तापक्रम पनि दिनभरीको उतारचढाव अनुसार नै हुन्छ । हाम्रो तापक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी दिनभरीमा कति सक्रिय रहन्छौं भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ । दिनको समयमा के–के गर्नु भयो र के खानु भयो र के पिउनु भयो यो कुराले पनि तपाईंको तापक्रमलाई असर पार्छ ।
प्रायजसो अवस्थमा १०० दशमलव ४ डिग्रीभन्दा कम तापक्रमलाई चिन्ताजनक मानिंदैन । हल्का ज्वरो आउँदा आराम गर्नु र तरल पदार्थको सेवन गर्नाले आफैं ठीक हुन्छ ।यदि हल्का ज्वरो आएको छ (१००.४ डिग्री भन्दा कम) र जाडो भएको, खोकि लाग्न शुरु भएको छ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ ।आरामले मात्र ठिक हुन्छ कि उपचारको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा तपाईंको डाक्टरले बताउन सक्छन् ।
यसपछि पनि आफु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको लाग्छ भने आफुलाई ७ दिनसम्म आइसोलेशनमा बस्नुपर्छ ।यद्यपि, लक्षण गम्भिर हुँदै गएको देखिएमा तुरुन्त उपचार प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । गम्भिर लक्षणहरुमा निम्न प्रकारका छन् ।सास फेर्न धेरै गाह्रो हुनु ।छातीमा दवाव भएको महसुस हुुनु ।अनुहार अथवा ओठ निलो हुनु ।द्विविधा महसुस हुनु । अनलाइनखबरबाट